Halkan Arin Oo Cadayn U Ah In Mustaqbalkii Philippe Coutinho Ee Barcelona Uu Soo Dhamaaday. - Gool24.Net
Muddo 18 bilood ah kadib markii uu Philippe Coutinho lacagtii abid ugu badnayd ugu biiray kooxdiisa Barcelona waxaa soo baxaya warar sheegaya in la helay cadayn muujinaysa in mustaqbalkiisii Camp Nou uu soo dhamaaday.
Philippe Coutinho ayaa dhawr jeer qirtay in wixii uu xataa naftiisa kaga filayay in uu Barcelona ku qaban karo uu gaadhi kari waayay, isaga oo qirtay in xaalada adag uu ku soo maray sanadkii iyo badhkii uu Barca ka tirsanaa.
Sida lagu sheegay barnaamijka Programa deportivo ee uu daadihyo Manolo Escobar, carruurta Coutinho ayaan laga diwaan galin iskuulka magaalada Barcelona taas oo cadayn looga dhigay in xidiga reer Brazil aanu sal dhigan isla markaana uu ka fikirayo in uu koox kale ku biiro.
Wararka ayaa sheegaya in Barcelona ayna la’aanta Coutinho heli karin Neymar Jr waxayna doonayaan in ay PSG ku wareejiyaan Coutinho si uu hoos ugu dhigo lacagta badan ee ay PSG ku qiimaynayso Neymar.
Laakiin Coutinho ayaa iskuulkii ay caruurtiisu ka diwaan gashanayd ayuu ka saaray isaga oo aan sanad dugsiyeedka cusub u diwaan galin taas oo ah mid muujinaysa habanti la’aanta mustaqbalkiisa Barcelona.
Laakiin in aan caruurta Philippe Coutinho laga diwaan galin iskuulkii magaalada Barcelona waxaa laga fahmay in ay meel kale u socdaan maadaama oo ay ogyihiin in Barca ay doonayso in ay iibiso.
Coutinho ayaa si joogto ah loola xidhiidhinayaa kooxaha PSG iyo Liverpool oo la filayo in ay noqon karaa labada kooxood ee ugu suurtogalsan in xidiga reer Brazil uu ku biiri karo.
Philippe Coutinho ayaa fasaxa xagaaga la qaadanaya xidiga ay xidhiidhka cajiibka ah leeyihiin ee Roberto Firmino kaas oo ay xulkooda Brazil ugu soo wada guulaysteen tartankii Copa America.
Look at #Firmino & #Coutinho faces when they meet each other. Phil Coutinho desperate to come back to Liverpool #LFC pic.twitter.com/iFoOalXrFV
— indykaila News (@indykaila) July 17, 2019
Laakiin Liverpool ayaan la filayn in ay xagaagan lacago badan ku bixiso saxiixyo cusub inkasta qiimaha Coutinho ee suuqu hoos u dhacay muddadii uu Barcelona ka tirsanaa.
Si kastaba ha ahaatee, diiwaan galin la’aanta iskuulka ee caruurta Coutinho ayaa noqotay mid bixisay qishka in mustaqbalkiisii Barcelona uu soo dhamaaday isla markaana uu Camp Nou ka bixi doono xagaagan.
Wllayaal wax walba lama soo qoro kolba wargays yadan Spanishka ee beenaale yaasha ah ayaad noosoo qortaan